Mareykanka oo Muqdisho ka dejiyey gaadiid aan rasaastu karin (Maxey tahay sababtu?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Diyaarad weyn oo nuuca xamuulka ah ayaa maanta Muqdiusho ka dejisay labo gaari oo ah nuuca aan rasaastu karin, kuwaasoo ay adeegsan doonaan madaxda safaaradda Mareykanka ee Muqdisho iyo shaqaalahooda.
Dowladda Mareykanka ayaa bishii Febraayo ee sanadkaan 2015 waxay si rasmi ah safiir ugu soo magacawday Soomaaliya, muddo 24-sano kadib, waxaana loo magacaabay Haweeney muddo ka shaqeyneysay Wasaaradda Arrimaha Dibada Mareykanka oo lagu magacaabo, Katherine Dhanani.
Safaaradda kaliya ee reer galbeedku leeyihiin ee ka furan Muqdisho ayaa ah safaaradda Britain oo ku dhex taala xeyndaabka weyn ee aadka loo ilaaliyo ee Xalane ee xarrunta u ah ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM.
Mareykanka ayaan Safaarad joogto ah ku laheyn Soomaaliya, tan iyo sanadkii 1991-dii, waxaana mudadii bur burka uu u soo magacaabayay Soomaaliya Ergey, kaasoo uu fadhigiisa uu ahaa magaalada Nairobi.
Mareykanka ayaa sheegaya in wixii haatan ka dambeysay uu si rasmi ah uga shaqeyn doono gudaha Soomaaliya, iyadoo safaaraduna Muqdisho degi doonto.